musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vanotamba Nhabvu Vanotamba Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhoti Genius iyo inonyatsozivikanwa neNickname; 'Kun'. Our Sergio Aguero Childhood Indaba pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira Upenyu hweupenyu pamberi peShoko, Upenyu hweMhuri uye dzakawanda OFF uye ON-dzika zvishoma zvishoma kuzivikanwa pamusoro pake.
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Chiitiko Chokuzvarwa
Sergio Aguero semucheche
Sergio Leonel "Kun" Agüero del Castillo Agüero akaberekerwa kuQuilmes, Buenos Aires pana 2 June 1988 semwana wechipiri mumhuri huru ine vana vanomwe. Amai vake, Adriana, vaiva amai vomumba, uye baba vake, Leonel, vaiva mutyairi wetekisi. Vose vari vaviri vachiri kuyaruka vasati vaberekwa mwanakomana wavo Sergio Leonel "Kun" del Castillo Agüero.
Kufamba pamberi Sergio Aguero Kuberekwa
Amai vaAguero vakanga vari kure nekuzvitakura zvakakwana naye. Apo mai vadiki vechidiki Adriana vaiva nemimba mitanhatu yemwedzi, imba duku yaakagovana naRoelel del Castillo uye mwanasikana wekutanga Jessica munharaunda yevarombo yeGonzán Catan yeBuenos Aires yakazara nemvura. Vakamanikidzwa kubuda, vachienda kumvura yakadzika kunyange nemimba yake yekuzvitakura. Vakapedza mavhiki maviri vachirara pamakateti kuchikoro vasati vasvika kumusha.
Apo amai vake vakanga vava kuda kubata pamuviri mwana Sergio Agüero, akasiya chirongo ichi kuenda kuchipatara chinorumbidzwa muguta guru reBuenos Aires. Zvinosuruvarisa, iye akarambwa kubva kuchipatara nekuda kwekushaya kwemurume wake kubhadhara mari yechipatara ichibva pamatambudziko muhutano hwake. Zvisinei, mazano akakurudzirwa pane dzimwe zvipatara zviripo zvinogona kumugamuchira. Mushure mokurambwa kubva kuchipatara chikuru, vose vakaroorana vakakurudzirwa kushanyira chipatara chisingatauri muLa Matanza, chivako chepurovhinzi cheBuenos Aires (Capital of Argentina). Ndinofara, mushure mehondo dzose, mwana Sergio Aguero akaberekerwa muchipatara ichi musi we2nd yaJune, 1988 pane 3: 23pm kuyeza 9.7 pound.
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Post Post Birth debates
Vabereki vaSergio Aguero (Mr naMe Del Castillo) vakawanikwa kuti vari vana vaduku nezvipatara mushure mokuberekwa kwemwanakomana wavo. Iye, pa18, uye pamwe naEo Leo, 19, vakaverengwa sevana uye vakanga vasina kuroorwa.
Pamusoro pechinyorwa ichocho, baba vake Leonel Del Castillo vakaramba kodzero yepamutemo yekusaina rejeri rechipatara. Kunyangwe kusarudzwa kwekupedzisira kwakapiwa kwavari kwakanga kusina kuwanikwa. Havana kukwanisa kupa zvinyorwa zvavo zvenyika zvingadai zvakabatsira matambudziko. Zvinosuruvarisa, izvi zvinyorwa zvenyika zvese zvakange zvaparadzwa mumafashamo akavadzinga kunze kwemusha wavo wokutanga. Izvi zvinoreva kuti mwanakomana wavo aisazopindura mhuri yezita rokuti 'Del Castillo'. Vabereki vose vaifanira kutsvaga rubatsiro kune mumwe munhu muKuta kuti vamire baba. Paaisayina, 'Sergio' sezita rakagamuchirwa zita uye iro raamai vake (Aguero) raishandiswa mumabhuku ehurumende. Kusvikira musi, anozivikanwa nezita iri. Kusiyana nehanzvadzi dzake Yesica, Gabriela, Maira, Daiana, Mauritius naGaston, akatora zita raamai vake, Agüero, uye kwete 'Del Castillo' (Baba Surname).
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Kutumidza Kutaura
Panguva yemutambo wezita raSergio Aguero, vabereki vake vaidawo kududza zita rake repakati se 'Lionel', asi vakarambidzwa neArginia Civil Registry Restrictions. Vakazogadzirisa zita repakati 'Leonel' izvo kwavari zvakanga zvichiri pedyo 'Lionel'. Zvakakosha kutaura kuti panguva iyoyo, zita racho 'Lionel' yakanga isisati yagamuchirwa sezita revana vari mudunhu iroro. Uyu waiva mutemo wakasimbiswa muRosario, apo mumwe wevanhu vaEguero vemazuva ano 'Lionel Messi' akaberekerwa vabereki Jorge naCelia Messi.
Lionel Messi, iwe wakaberekwa kare (24 June 1987) aiva pakati pevaya vane ruzivo kuti zita rake ribvumirwe nehurumende yaRosario.
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Nhoroondo mushure meNickname 'KUN'.
Apo Sergio aiva nemakore 2, vakatamira kune Florencio Varela, kumaodzanyemba Greater Buenos Aires. Apa ndipo apo mhuri yeAgüero-Castillo yakava shamwari dzepedyo nemuvakidzani wavo - Mr Chetti nemhuri. Mutungamiri Jorge Chetti, mutungamiri weimba, ndiye akapa Sergio zita rezita rairo ratinoziva nhasi.
Iko kunobva moniker yaiva yakakurumbira yeJapan (yakatanga kunzi Wanpaku Amukashi Kum Kum) iyo Sergio akashandura kutarisa paTV kana achiri muduku. Sergio aida kutarisa kusangana kwemukoko wakaipa-mukomana nemhuri yake, avo vaigara pasi pezasi pe Kum Kum Mountain. Nokukurumidza zvakakwana, iye aizoramba achinyunyutira "kum kum" nguva dzose, uye iyo ichange iri kufemerwa kwezita rake rekudanwa, iro zvino rave richizivikanwa munyika yose. Uye saka zvakatanga nguva dze Kun Agüero.
Sergio Aguero akamboti, "Ndakurira kuinzwisisa nokuti yakasiyana. Zvakaoma kuona mutambi anonzi zita rakagadzirwa mushure mechitarisiko chemifananidzo! "
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Ukama nevabereki.
Sergio Aguero naBaba
Baba vaAguero ndivo mutambi webhola nebasa asi kambani yaakamboita nayo asati asarudzwa haasati yaitwa pachena. Ndiye ndiye akadzidzisa vechidiki Aguero sezvinoonekwa mumufananidzo vasati vatanga sevhizimusi nyanzvi yebhola.
Sergio Aguero naamai
Ukama hwakasimba huripo pakati pake nemukadzi wake.
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Hupenyu hwerudo
Sergio Aguero nemwanasikana waGeorge Maradona Giannina
Sergio Agüero akaroorwa nemwanasikana waMexico Maradona Giannina kwemakore mana. Hatina chikonzero chekuti nei vakaparadzana mu 2013 uye apo kurambana kwapera, zvisinei. Vakatangwa naGoorge Maradona mu2008. Uye zvingaita sokuti vanozvirova kubva nokukurumidza, nokuti Sergio Agüero akaroora Giannina Maradonna gore iroro uye mwanakomana wavo Bhenjamini akaberekwa mu2009.
Zvisinei, moto unopisa kwazvo pakati pezviviri zvakabuda kunze panguva 2012 yakauya. MunaJanuary 2013 ivo vaviri vakaparadzaniswa zviri pamutemo. Sergio aiva 24 panguva iyoyo uye Giannina chete 23. Uhu hwavo hwaro harina kumbokwanisa kunyatsogadzirira imba yavo. Sergio akave akaisvonaka mukurumbira webhokisi uye ave akakwanisa kupemberera kubudirira neboka rake Manchester City. Asi Giannina aigara zvikuru kuMadrid, uko Sergio akanga atamba kusvika 2011 yeAtletico. Paakaenda kuManchester kunotamba ikoko, zvaizoita sokuti Giannina haana kufamba naye.
Rutivi rwakawedzera pakati pevaviri avo vanogona kunge rwakaratidza kuguma kwemuchato wavo.
Mushure mekuparadzana kwakava mukuru weGiannina akadzokera kuBuenos Aires nekusingaperi. Izvozvo zvinoratidzika kunge zvakakunda Sergio zvakanyanya kukunda chero chinhu, nokuti iye zvino akanga asingakwanise kuona mwanakomana wake Benjamin, waanonyatsoda.
Zvave zvichinyunyuta kuti kupatsanurwa kwakave kwakasviba mushure mokunge Giannina asiya kuBuenos Aires uye Diego Maradonna aive achinyanya kutaura pamusoro pekutaura kutsigirwa kumwanasikana wake mudiki uye kuzvidza Sergio. Zvisinei, kutora mwanasikana wake, hazvigoni kushamisa. Pakupedzisira iye haafaniri kunge akaoma zvikuru kuna Sergio zvimwe; mushure mezvose, ndiiva Diego uyo akaudza vaviri vacho.
Sergio Aguero uye Mwanakomana (Benjamin)
Uyu mukomana, Benjamin Aguero atanga kuratidza tarenda yake yebhola nebasa rake rakanaka mumunda wekutamba. Akakunda mubati wemubhedha wababa vake genetics lottery. Kwegore mashanu, Bhenjamini ari kutoita kuti vamwe vana vachinetseke nezvekushaya kwavo kutamba.
Sergio Aguero naKarina Tejeda (Ex Girl Friend)
Sergio haana kutora nguva refu asati aenderera mberi, pasinei nekurwadziwa kwekushaya mwanakomana wake. Akakurumidza kuonekwa kunze neCarineinean cumbia muimbi Karina Tejeda uye vakazviti vakange vari pamwe chete kusvikira munguva pfupi yapfuura.
Zvose iye nemusikana wake vanotaridzika zvakanaka chaizvo. Vanowanzoonekwa uye vanocherechedza munzvimbo dzevanhu. Iwe pachako hakuna runyerekupe pamusoro pechato chavo.
Rudo rwaSergio Aguero, Toni Duggan
Asi kubva zvino iye anonzi akaparadzana kubva kwaari uye akatoshamwaridzana naToni Duggan, uyo ari kutamba timu yevakadzi veManchester City FC. Izvo zvave zvichionekwa pamwechete muhurumende.
Sergio Aguero naToni Duggan
Mishumo yakambobuda kubva kuArgentina iyo yakataura kuti Duggan akanga ari muukama neAugero muGuta, asi Duggan akatora ku Twitter kuti arambe zvirevo, achivarondedzera se "kusava nehanya".
Kunyange apo pane kuramba, imwe sarudzo yeTV muAguero yekuArgentina ichiri kuchengetedza tsika yekugoverana makuhwa ehukama hwavo.
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Kutya naMarcos Rojo
Sergio Aguero Feud naMarcos Rojo
Kutya kukuru pakati paSergio Aguero naMarcos Rojo kamwe kwakatanga manheru eManchester derby. Nyeredzi dzeArgentina dzinosangana nekutarisana neEtihad kwete nehutatu humwe huri pangozi asi mhembera yekare yekugadzirisa.
Vaviri ava vakapinda mumutsara unotyisa panguva yeNyika Cup apo Rojo akakoka murume wekare wemusikana waAguero, Karina Tejeda, muimba yekugadzirira yeArgent kuti apemberere kukunda Nigeria.
Cherechedza: Aguero akatanga kufambidzana Karina mushure mekuroorana kwake nemwanasikana waGeorge Maradona, Giannina, akaputsa makore maviri akapfuura.
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Nzira yeBati yakatanga sei
Nzira yebhola yakatanga sei kuna Sergio Aguero
Muna 1991, Sergio paakanga ava nemakore matatu, mhuri yake yakatamira kune imwe imba duku, iri nyore kunze kweLos Eucaliptus, shantytown iri kumadokero kumaruwa eQilmes naBernal. Iyi mutsara yevarombo dzimba yakanga iri duku kana ichienzaniswa nemamwe maguta akafanana eGreater Buenos Aires, asi yakanga yakawanda sezvikamu zvitatu zvisina kusarudzwa izvo zvakange zvasarudzwa semadhorobha eguta racho. Vagari vese, vaduku nevakuru, vakaungana mumatanda aya kuti vatambe kwenguva refu. Zvakanga zviri mundima idzi Sergio akatanga kuratidza zviratidzo zvetarenda rake nebhora - sezvo makore akapfuura, vaizozviratidza zvakajeka.
Sergio Aguero kutanga kutanga kwebhola
Pasi peLoelsels maziso akangwarira uye Adriana akasimba zvakasimba pamubairo uye kurangwa, Sergio akabatana nemakwikwi ake evechidiki mumakwikwi emitambo akasiyana-siyana ekumaodzanyemba kweBuosos Aires - achidzika nenzira imwechete iyo baba vake vakatsika paaiva muduku, muTucuman. Akaita zvinoshamisa mumatare mashanu-ne-side uyewo mune izvo zvinonzi "tsvina munda" yebhola, kunyora mujunior system yezvikwata zvakawanda - Loma Alegre, 1 de Mayo, 20 de Junio, Pellerano Rojo, Bristol uye Los Primos. Akanga ari chikamu chetsika yakakura yetarenda iyo muguta reBuenos Aires rinova vhiki rese, pamwe nezviuru zvevana zvinotarisira kukunda zvikwikwidzi zvinopikiswa zvikuru zvegore.
Jaya Sergio Aguero (Kudzidzisa unyanzvi hwebhola)
Kunakwanisa kuzviita zita rake semunhu ane unyanzvi uye anonzwisisika mumakwikwi aya, achiisa pfungwa kubva kune vanoona mazamu akazoona ramangwana rakanaka muChishanu Division mberi kwake. Muna 2005, gore nehafu gare gare, Sergio akanga ava kugara muuto re Independiente. Basa rake rakaisvonaka rakamupa nzvimbo muArgentina yehurumende yeU-20, pasinei neve 3 makore pasi pemusoro.
Sergio Aguero, achitaura nevabereki
Sergio akakunda U-20 World Cup yakagadzirirwa neNetherlands. Izvi akazvipemberera nemhuri yake. Mutsara wokupedzisira wekuNigeria wakagadziriswa nechirango chakapiwa Sergio uye akabatwa naLionel Messi. Kun akazvitsaurira kukunda kwake shamwari yake Emiliano Molina, uyo akambotamba naye nguva yose muhedheni yake muIndemeente's youth system uye zvinosuruvarisa kupera mutsaona yemotokari muHondo yeNyika.
Nguva pfupi mushure mekudzokera kuArgentina, akasarudzawo kuzvitsaurira kune shamwari dzake chiyeuchidzo chakanakisa munzvimbo yemauto derby pamusoro peMarcell de Avellaneda, uko Kun akawana chinangwa chichagara mumabhuku eArginean football.
Kun, makore gumi nemakore 17 asi akange ari chifananidzo chevanhu vazhinji, aifanira kuparadzana neboka rake raakada mu2006 paakaendeswa kuAlelético Madrid nokuda kwe23 mamiriyoni eE - Zvose zviri nhoroondo.
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Auto
Lamborgini Sergio Aguero
Aguero anoshandisa Huracan - mitambo yemitambo yakagadzirwa ne Lambgini. Inofungidzirwa kuti inokosha $ 160,000.00 (Mumwe zana uye makumi matanhatu nezviuru zvemadhora).
Kuratidzwa kwakazara kwaSergio Aguero's Lamborgini
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Kutsigira Nico Rosberg kukunda PUMA Race Challenge
Sergio Aguero Anopikisa Nico Rosberg kuti akunde PUMA Race Challenge
MuArgentine neManchester City mutevedzeri wechirangaridzo akaendeswa kuDonington Park Racing Circuit mu UK apo akapiwa chidzidzo naNico Rosberg, asati agadza tarenda rake kuedza pamugwagwa mumotokari yeMercedes C 63 AMG motokari yemotokari. Akafambisa kumativi ose, achiisa imwe nguva inofadza nguva dzenguva, achiratidza kuti tsoka dzake dzinoshanda pamwe chete pamusoro pededals sezvavanoita panhandare yebhola. Asingadi kuve kunze, asi muGerman Formula 1 mutyairi akazopa Aguero mararamiro ake mumotokari yeMercedes DTM.
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Tatoo Facts.
Sergio Aguero Tatoo chokwadi
Agüero ane chinyorwa mukati mukati meoko rwake rworudyi rwakanyorwa mu Tengwar-mhando yekunyora yakagadzirwa JRR Tolkien in Ishe Rings-kushandura zvishoma Kun Agüero muchiLatin alphabet. Iye anewo chinyorwa kuruoko rwake rworuboshwe rwezita remwanakomana wake uye zuva rokuzvarwa. (Ona pasi apa).
Sergio Aguero Tatoos uye zvavanoreva
Sergio Aguero Ubhuro Nyaya Plus Untold Biography Facts -Mwana wechikoro Akasimudzirwa pamusoro peSergio Aguero Haircut.
Mwana wechikoro Akasimudzirwa pamusoro peSergio Aguero Haircut.
Mumwe musikana akanga avhiringidzwa kubva mukirasi nechikoro chake nokuti akanga ane bvudzi rakagadziridzwa nevebhodhi dzake dzehondo. Akarayirwa kuti arambe ari mumba kusvikira apera, mhuri yake yaitaura.
Tom Moseley ane makore gumi akaudzwa zvishoma nezvake uye akaisa ruvara rwebvudzi, akataridzirwa nemuvengi weManchester City, akanga akanyanyisa. Akabviswa kuchikoro musi wekuzvarwa kwake.
Edin Dzeko Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts